Fahadisoana 7 hataonao amin'ny fampisehoana marketing | Martech Zone
Alakamisy 23, 2017 Talata, Novambra 28, 2017 Sam Melnick
Mihena ny tetibola CMO, satria miady amin'ny fahamatorana ara-bola ny mpivarotra, hoy i Gartner. Miaraka amin'ny fandinihana bebe kokoa ny fampiasam-bolan'izy ireo noho ny teo aloha, tsy maintsy takatry ny CMO izay mandeha, inona no tsy misy, ary aiza no handaniany ny dolara manaraka hanohizany hanatsara ny fiantraikan'izy ireo amin'ny orinasa. Ampidiro Marketing Management Management (MPM).
Inona ny fitantanana fahombiazan'ny marketing?
Ny MPM dia fitambaran'ny fizotrany, ny haitao ary ny fiasa ampiasain'ny fikambanana marketing mba handrafetana ireo hetsika ara-barotra, hanombanana ireo vokatra mifanohitra amin'ny tanjona napetraka ary handray fanapahan-kevitra misy fiantraikany bebe kokoa.
Na izany aza, androany dia 21% amin'ireo orinasa ihany no manana ny fahafantarana tsara ny fandraisan'anjaran'ny Marketing amin'ny fidiram-bola, araka ny Fandinihana ny benchmark an'ny fahamatorana 2017 an'ny Allocadia. Ity fikarohana ity dia nandalina lalina ny olana tamin'ny resaka kalitao niaraka tamin'ny CMO mitarika ary koa ny fanadihadiana marobe.
Faha-efatra fahombiazan'ny mpivarotra be asa
Amin'ny ankapobeny, na dia mbola manana asa betsaka aza ny indostria hanatsarana ny fananganana sy ny fahamatoran'ny MPM, misy ny fikambanana mitarika izay mametraka fenitra ho an'ny namany.
Nahita lafin-javatra fahombiazana marobe ho an'ireto mpivarotra am-perinasa ireto izahay:
Fifantohana matanjaka amin'ny angona fampandehanana fototra; fampiasam-bola, fiverenana ary fomba fijery stratejika momba ny angona toa ny ROI.
Fampiasana haitao manerantany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary fampidirana eo amin'ny faritra rehetra amin'ny fantsom-teknikany.
Loharanom-baovao madio madio.
Fandrefesana manaporofo ny lanjan'izy ireo amin'ny orinasa sy ny tanjony.
Ny fanadihadiana dia nahitana ihany koa hadisoana lehibe fito ataon'ny fikambanana mifandraika amin'ny MPM:
Teknolojia efa lany andro - Ny ekipa mpivarotra dia miankina amin'ny fanavaozana ny rafitra CRM maoderina. Ny fitantanam-bola dia tantanan'ny rafitra ERP nandritra ny taona maro. Na izany aza, ny 80% n'ny fikambanana dia mbola mampiasa Excel amin'ny fomba sasany hanarahana ny fiantraikan'ny Marketing amin'ny orinasa. Ny fandinihana nataonay dia nahita fa 47% amin'ireo fikambanana no tsy mampiasa misy teknolojia namboarina tanjona mihitsy raha ny momba ny drafitra na ny fitantanana famatsiam-bola (hetsi-panoherana lehibe amin'ny Marketing Performance Performance). Rindrambaiko fitantanana fahombiazana amin'ny marketing 3.5X matetika kokoa noho ireo manana fitomboana fisaka na ratsy.
Fandrefesana marketing izay tsotra fotsiny tsy actionable - Ny fandinihanay dia nahita fa ny 6% amin'ireo mpivarotra ihany no mahatsapa fa ny refin'izy ireo dia manampy amin'ny famaritana ny hetsika marketing manaraka tsara indrindra. Izany dia mamela ny 94% amin'ireo ao amin'ny fianaranay tsy misy torolàlana mialoha momba izay hampiasana ny tetibola voafetra sy ny enti-manana.
Ny toetran'ny MPM dia mifanohitra tanteraka amin'ny refin'ny marketing. Raha ny refin'ny marketing B2B dia maneho ny zavatra hitan'ny mpamily ao amin'ny fitaratry ny fiara, dia ny MPM no jiro sy ny familiana ny fiara mihitsy izay manatsara ny fahitana sy ny fanaraha-maso ny mpamily. Allison Snow, mpandalina mpikaroka zokiolona, Forrester
Famaritana diso eo amin'ny Marketing sy ny orinasa - Orinasa manantena fitomboan'ny fidiram-bola mihoatra ny 25% dia avo roa heny noho ny tatitra CMO mampiseho ny fandraisan'anjaran'ny Marketing amin'ny orinasa. Ireto orinasa mitombo avo lenta ireto dia toa 2.5X no betsaka noho ny fikambanana tsy mahomby mahita ny data momba ny varotra sy ny varotra hatrany na matetika mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa ankapobeny. Midika izany fa ny mpitarika ao amin'ny MPM dia manana fidiram-bola ao amin'ny orinasa miasa miaraka amin'ny tanjon'ny orinasa.
Olana amin'ny fifandraisana CFO sy CMO - Ny fikambanana tsara indrindra amin'ny fianaranay dia 3X azo inoana fa mampifanaraka ny asan'ny Marketing sy ny Fitantanam-bola. Na izany aza, 14% fotsiny amin'ireo orinasam-barotra no nahita an'i Finance ho mpiara-miasa stratejika matoky, ary ny 28% na tsy manana fifandraisana amin'ny vola na miteny fotsiny rehefa terena. Mampidi-doza izaitsizy tokoa izany satria miasa ny Marketing mba hahazoana antoka ny teti-bola sahaza azy ary mametra ny fahatsapana ny Marketing ho ampahany stratejika amin'ny orinasa. Ny fahatokisan'ny CFO iray dia manakiana ny CMO ankehitriny. Mifanohitra amin'ny mpanao ambany, ny fanadihadianay dia nahita fa ny fikambanana mitombo avo lenta dia miara-miasa amin'ny Vola mba hanarahana ny fampiasam-bola sy ny fandrefesana (57% raha ampitahaina amin'ny 20% amin'ireo orinasa manana fisondrotana fisaka / ratsy). Izy ireo koa dia mety kokoa hifanaraka amin'ny Vola amin'ny fandrefesana ny teti-bola sy ny fiverenana (61% raha ampitahaina amin'ny 27% fotsiny amin'ireo orinasa miaina fitomboana fisaka na ratsy.)
Ratsy ny fampiasam-bola, ny teti-bola ary ny drafitra kalitaon'ny angona - Ny kalitaon'ny angon-drakitra (mifandraika amin'ny fampiasam-bola, teti-bola ary drafitra) dia fanamby iraisana eo amin'ny fikambanana, izay mametra ny fanaovana tatitra sy ny fahaizana mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny varotra. 8% monja amin'ireo fikambanana no manana angona marketing, varotra ary fitantanam-bola ao amin'ny trano fitehirizana angona iray izay miasa toy ny “loharanom-pahamarinana tokana.” ary 28% ihany no mahatsapa ny angon-drakitra momba ny marketing ary voalamina tsara (ao anatin'izany ny 8% voalohany).
Ny tsy fahampian'ny fahitana amin'ny mari-pahaizana baseline - 50% amin'ireo fikambanana ihany no milaza fa manana fahitana feno, na tsara kokoa, ho lasa metrika marketing. 13% amin'ireo no nitatitra fa tsy fantany akory hoe aiza no misy ny angon-drakitra rehetra ary tsy afaka mihazakazaka misy tatitra. Ouch.
Fampiasana Martech tsy mifanaraka - Ireo orinasa mampifangaro hatrany ny haitao amin'ny orinasam-pivarotana iray manontolo dia 5X toa mahita fitomboana 25% + fidiram-bola noho ireo manana fitomboana fisaka na ratsy (57% vs. 13%). Inona koa, fampiasana tsy tapaka ny teknolojia marketing (ohatra ny marketing mitovy sehatra automation fa tsy mpivarotra telo samy hafa manerana ny fikambanana) dia misy fiovana lehibe. Manodidina ny 60% amin'ireo orinasa manantena ny fampiakarana teti-bola mihoatra ny 10% no milaza fa ny fampiasana teknolojia ara-barotra manerana ny fikambanana dia mifanaraka foana na matetika, raha ampitahaina amin'ny 36% amin'ireo izay manana fitomboana ratsy hatrany. manana mazava tsara na tsara indrindra amin'ny sori-dàlana momba ny haitao marketing, mifanohitra amin'ny 70% amin'ireo izay manana fanantenana tsy mitombo.
MPM Manan-danja amin'ny CMO rehetra
Ny marketing dia tsy maintsy mijery ny fikambanany bebe kokoa toy ny orinasa, fa tsy asa fotsiny. Tsy maintsy ataon'izy ireo isaina ny dolara rehetra mba hampitomboana ny fahombiazan'ny ekipany sy hanaporofoany ny vokany.
Manantena ny CEO fa ny CMO dia afaka mamakafaka mora foana ny fomba fandraisana anjaran'ny marketing amin'ny farany ambany. Rehefa manana fidirana amin'ny angona ireo CMO dia miova ny zava-drehetra. Mpijery CMO Jen Grant, ao amin'ny tafatafa farany natao tamin'ny CMO.com
Ny CMO izay mahomby amin'ity dia mahazo ny fahatokisana sy fahatokisan'ny namany, ary ny filaminana hahafantarana ny ezak'izy ireo dia refesina sy omena lanja. Ireo izay tsy mahomby dia atokana handray baiko sy hanatanteraka, fa tsy hanao tetika sy hitarika. Hahafantatra bebe kokoa momba ny MPM:
Sintomy ny tatitra momba ny Benchmark feno
Tags: allocadiampivarotra mahay beJen Grantmari-pahaizana momba ny fahamatorana ara-barotrafitantanana fahombiazan'ny marketingfahamatorana amin'ny fahombiazan'ny marketingmpm
Sam Melnick no VP an'ny Marketing ao Allocadia, ny mpitarika ny rindrambaiko Marketing Performance Management, mitantana $ 20B amin'ny fandaniana amin'ny marketing amin'izao fotoana izao. Mpandraharaha ara-barotra mpandresy nahazo mari-pankasitrahana izy ary manana traikefa amin'ny maha-marketing amin'ny Vivox, mpandinika indostria CMO ao amin'ny IDC, ary mpitantana fahombiazan'ny mpanjifa ao amin'ny Lattice Engines. Sam dia mpandahateny matetika amin'ny hetsika indostrian'ny varotra ary mpanoratra fikarohana fikarohana marobe. Nekena ho matihanina amin'ny teknolojia marketing 50 mahery indrindra izy, miampy iray amin'ireo mpamorona 40 ambony any New England amin'ny atiny sy ny marketing nomerika. Sam dia nahazo diplaoma tamin'ny Sekolan'ny fitantanana Isenberg an'ny UMass Amherst.